Homeसमाचारप्रधानमन्त्री ओलीका कारण ‘कपिल शर्मा शो’ फ्ल’प !
January 5, 2021 admin समाचार 9690
नेपाल क’म्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारीक रुपमा वि’भाजन भएपछि अहिले दुई पक्षका नेता एक अर्का विरुद्ध आ’रोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक समु’ह छ भने पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको अर्को स’मुह छ । दुवैले आफ्नो समुह नै वास्त’विक नेकपा भन्दै दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने नि’र्णय गरेपछि नेकपा अनौपचारीक रुपमा वि’भाजन भएको हो ।
पार्टी वि’भाजन भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनका अभि’ब्यक्ति अहिले चर्चित भएका छन् । कतिपय अवस्थामा ओलीले पदिय मर्यादा स’मेत नाघेर तुच्छ टिप्पणी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । यसैबी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेतृ बिना मगरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘कपिल शर्मा शो’लाई फ्लप गरेको ब’ताएकी छिन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघको स’भाहलमा आयोजित एक कार्य’क्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । हास्यव्यङ्ग्य तर्क दिदै सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कपिल शर्मा शो’ लाई समेत यतिबेला फ्लप गरिसकेको टि’प्पणी मगरले गरेकी छन् ।
भेलालाई सम्बो’धन गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिकमाथि कुठाराघात गर्दै प्रधानमन्त्रीले असंवै’धानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउनुभयो । यस्तो ता’नाशाही प्रवृत्तिलाई नागरिकले चाँडै परास्त गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री र उहाँका आसेपा’सेहरूको भविष्य अब धेरै लामो समय छैन ।’ पूर्व खानेपानी मन्त्री समेत रहेकी मगरले प्रधानमन्त्री ओलीको तानशाही प्रवृत्तिलाई जन’तालेचाँडै परास्त गर्ने स’मेत दावी गरेकी छन् । – इताजा खबरबाट
February 2, 2021 admin समाचार 7361
नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रकी लो’कप्रिय गायिका अञ्जु पन्तलाई संधै सोधिने प्रश्न हो जिवन साथी क’हिले खोज्ने ? उनले यो प्रश्नको जवाफ टार्दै आएकी थिइन् । तर अब उनी चाँडै विवाह गर्ने यो’जनामा छन् । गायक तथा
March 7, 2021 admin समाचार 6382
उर्लावारीको प्रविण वास्तोला घ’टनाले फेरी अर्को रुप लिएको छ । घट’ना अनुसन्धानमा प्रहरीको लाप’रवाही भएको भन्दै आन्दोल’नमा उत्रि’एका प्रविणको परिवारले थप लापरवाहीको प्र’माण फेला पारेपछि आ’न्दोलिन भएका छन् । दुई महिना अघि रह’स्यम नि’धन भएका
मलेसियाका नाइट-क्लबमा नेपाली युवतीको कथा, ‘अब त बानी पँरे, ४ बर्ष भयो पैसा कमाई राम्रै छ’
March 23, 2022 admin समाचार 1515
हरेक नागरिक-लाई रंगीन सपना देख्‍ने छुट छ। त्यही रंगीन सपना सार्थक बनाउन मानिस दौडि`रहेका छन्। सुन्दर जीवन जिउने सपनाकोपछि लागेर लाखौं नेपाली युवा-युवती विदेशिन बाध्य पनि छन्। भविष्यमा जीवन-लाई सरल रेखामा हिँडाउने चाहना बोकेर वर्तमानको